Dhageyso Magaalada Baydhabo Oo ku soo badaneya Dhalinyarada Fursadaha shaqa abuuraneya si ay uga baxaan shaqa la,aanta. | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso Magaalada Baydhabo Oo ku soo badaneya Dhalinyarada Fursadaha shaqa abuuraneya si...
Dhageyso Magaalada Baydhabo Oo ku soo badaneya Dhalinyarada Fursadaha shaqa abuuraneya si ay uga baxaan shaqa la,aanta.
Wuxuu sheegey iibinta biyaha cabitaanka in uu kaga badbaadey fikirada qaldan tahriibka iyo in uu baaqi muudo uu ku ahaado Magaalada Baydhabo asigoo hada uu leeyahay xaas iyo Laba carruur ah Hafow cali oo ka mid ah dhalinyarada abuuratay shaqooyinka yar yar.
Dhalinyarada ugu badan maanta degaanada koonfur galbeed gaar ahaan Magaalada Baydhabo waxey yihiin kuwo shaqo la`aan hafow cali si uu u helo lacag ayaa Mudo 5 sano ah ka hor wuxuu go`aansadey in uu noqdo qof nolal maalmeedkiisa ka soo dhax saarto magaalada baydhabo wuxuuna ku dhiiradey in uu iibiyo cabitaanada kala duwan.
Previous articleDhageyso Tababar lagu baranaayay Fagaare ka hadalka oo Magaalada Baydhabo lagu qabtay.